यस्तो छ विश्वकै पहिलो सेक्स स्कूल! – Everest Dainik – News from Nepal
यस्तो छ विश्वकै पहिलो सेक्स स्कूल!
अस्ट्रियाको राजधानी भियनामा एउटा गज्जबको स्कुल खुलेको छ। भर्ना हुने उमेर न्युनतम १६ वर्ष राखिएको उक्त स्कुलमा यौनबारे व्यवहारिक कुराको शिक्षण गरिनेछ।
‘अस्ट्रियन इन्टरनेसनल सेक्स स्कुल’ भनिएको उक्त स्कुलले विद्यार्थीहरूलाई राम्रो प्रेमी बन्न सिकाउने दाबी गरेको छ। तर यस स्कुलमा भर्ना हुन विद्यार्थीहरूले ठुलो रकम चुकाउनु पर्नेछ।
विद्यालयले जारी गरेको विवरण अनुसार यस विद्यालयमा भर्ना हुने विद्यार्थीहरूले प्रत्येक त्रैमासिक सत्रमा एक हजार ४ सय पाउण्ड अर्थात लगभग १ लाख ९७ हजार रुपैयाँ तिर्नु पर्नेछ। स्वीडेनमा जन्मिएकी यस विद्यालयकी प्रधानाध्यापिका याल्भा मारिया थम्प्सनका अनुसार १६ वर्ष उमेर पुगेका जोसुकैले पनि विद्यालयमा भर्ना हुन् पाउने छन्।
उनका अनुसार विद्यार्थीहरूलाई राम्रो प्रेमी बन्न सिकाउने यो नै सम्भवतः विश्वको पहिलो स्कुल हो। यस विद्यालयमा सिकाइको सैद्धान्तिकभन्दा व्यवहारिक पक्षमा बढी ध्यान दिइने उनको भनाइ छ।
यसका लागि छात्र तथा छात्राहरूलाई एउटै छात्रावासमा राखिने गरिन्छ ताकि उनीहरूले आफ्नो गृहकार्य राम्रोसँग गर्न सकुन। उनका अनुसार यस विद्यालयमा यौनक्रियाका प्रमुख आसन, प्रेम, स्पर्श, चुम्बन तथा महिला र पुरुषका शारीरिक विशेषताहरूबारे व्यवहारिक रूपमा सिकाइने छ। पढाई सकिएपछि विद्यार्थीहरूले विधिवत रूपमा प्रमाणपत्र समेत पाउने उनको भनाइ छ।
थम्प्सन विभिन्न खालका कला प्रदर्शनका लागि प्रख्यात रहेकी छिन्। उनले एउटा प्रदर्शनीमा नग्न महिलाहरूका विभिन्न मुद्राहरूमा रहेका सयवटा मूर्ति राखेकी थिइन्। ब्रिटिश समाचारपत्र ‘डेली मेल’सँग कुरा गर्दै यस स्कुलका प्रवक्ता मेलोडी कर्सले, ‘हामीलाई पूर्ण विश्वास छ यो विद्यालय पूर्ण रूपमा सफल हुन्छ।’
हुन त अस्ट्रियामा यस विद्यालयको विरोध हुन सुरु भइसकेको छ। यस विद्यालयले टिभीमा दिने गरेका भड्किला र उत्तेजक खालका विज्ञापनहरू यसअघि नै प्रतिबन्धित भइसकेका छन्। यस स्कुलको विरोध गरिराखेका एक अस्ट्रियाली नागरिक भन्छन्, ‘यस विषयलाई निकै रोचक ढंगले प्रस्तुत गरिएको भएपनि यो सेक्सको व्यापार हो, यो बन्द हुनु पर्दछ।’
मार्सी किन्न खेतमै पुग्छन् व्यापारी